Linux HelpDesk - MYSTERY ZILLION
November 2008 edited May 2009 in Linux/Unix
Linux Help Desk ပါ။
Linux/Unix နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိချင်တာရှိသည်များ၊ အခက်အခဲများ၊ တိုလီမိုလီများ အစရှိတာတွေကို ဒီနေရာမှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Linux ကို စိတ်ဝင်စားသူများ၊ Linux newbie များ အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Linux ကျွမ်းကျင်သူ expert/specialist တွေကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ တက်နိုင်သမျှလေး share ကြပါ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ Linux/Unix သုံးသူ user များ သာမန်ထက်နည်းနေသေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း တက်နိုင်သလောက် Promote လုပ်တဲ့သဘောလေးပါ။
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ POSIX Group ဝိုင်းတော်သားများမှ ကြိုးစားဖြေကြည့်ပါမယ်။ သိပ် advance ဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းများတော့ ဖြေနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း အခုမှ Study လုပ်နေကျတဲ့သူများဖြစ်နေလို့ပါ။
Linux/Unix ကို စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ POSIX Group ကို Join ဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မေးကြ ဖြေကြ ဆွေးနွေးကြ
linux red hat5ကို text mode နဲ့ installed လုပ်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....
Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) လား၊ နဂို ရိုးရိုး Red Hat5old version လားဗျ။
Red Hat အခွေလေးထည့်ပြီး boot တက်လိုက်။ ပြီးရင် အင်စတောမယ်ဆိုရင် Enter မနှိပ်ဘဲ linux text လို့ ရိုက်လိုက်။ ဒါဆို linux text mode installation လေးက စပြီ။ ပြီးရင် သူမေးတာလေးတွေကို လိုက်သာဖြေလိုက်၊ ဖြည့်လိုက်။ မခက်ပါဘူး။ ပါတေးရှင်းခွဲမယ့်နေရာသာ ရှုပ်မယ်ထင်တာပဲ။ ကျန်တာတွေက အေးဆေးပါ။ red hat, RHEL ဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
yezeiyashein wrote: »
linux မှာ file server လုပ်တာအဆင်မပြေလို.ပါ။ share folder တွေကိုမြင်ပဲမြင်ရပြီး Seleat Enter လုပ်တာနဲ. Access Deined ဖြစ်ဖြစ်နေလိုပါ။ fedora 7,8,9 မှာပါ။
infominmin wrote: »
Linux to Linux အချင်းချင်း share တဲ့ NFS Server လား????
Linux နဲ့ Windows အပြန်အလှန် share တဲ့ Samba Server လား ခင်ဗျာ။
Linux နဲ့ Windows အပြန်အလှန် share တဲ့ Samba Server par ခင်ဗျာ။ __________________
ဆာဗာဗားရှင်းနဲ့ Desktop ဗားရှင်း ဘာတွေ ကွာပါလဲ ခင်ဗျာ...
ဆာဗာမှာ ဘာတွေ ထပ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုလာပါသလဲ...
ဘာတွေ ပိုကောင်းပါသလဲ ခင်ဗျာ... ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပြည့်ပြည့် စုံစုံလေး ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
ဆာဗာ OS တင်လိုက်ပြီဆိုရင် အချို့ ဆော့၀ဲလ်တွေ ရမ်းလို့ ရပါဦးမလား ခင်ဗျား...
ဥပမာ.. XAMPP တို့လို localsever လုပ်တဲ့ ဆော့၀ဲလ်မျိုး...
ပုံမှန်အတိုင်းဆို Linux server တွေက text mode နဲ့ install တာများတယ်။ test mode နဲ့ဆို CLI အသုံးပြု applications တွေ run လို့ရမှာပါ။ အဲဒီအပေါ်မှာ Desktop ကိုလဲ Install လုပ်လို့ရပါတယ်။ Desktop Installed လုပ်ပြီးကတည်းက ပုံမှန် GUI applications တွေကို run လို့ရပါပြီ။
နောက်ပြီး Desktop ကိုလဲ Server အဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Server လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Samba, Apache အစရှိတဲ့ဟာတွေကို Install လုပ်ပေးပြီး လိုအပ်တဲ့ configuration တွေလုပ်ပေးလိုက်ရင် Server အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
များသောအားဖြင့် Server ကို ဒီအတိုင်းပစ်ထားကြတာများတယ်။ လိုအပ်မှ သွားပြီး ဟိုဟာ Install လုပ်ဒီဟာ Install လုပ်ပြီးတော့ administration နဲ့ configuration လုပ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်စက်မှာ Linux ကိုစသွင်းချင်ရင် ဘာလိုအပ်ပါသလဲ
(တခါမှမသွင်းဘူးလို့ပါ အခုမှပြောပြောကြတဲ့ Linux ကိုစသွင်းမှလို့ပါ:D)
စက်ရဲ့ information ကိုပြောပြရမလားခင်ဗျာ
Linux သွင်းချင်ရင် Linux CD ခွေပဲလိုပါတယ်...
Fedora, Ubuntu , Red Hat အစရှိသဖြင့်ပေါ့...
requirement ကလည်း memory 256 လောက်နဲ့တင်ဖြစ်တာပါပဲ...
ကျွန်တော်သွင်းတုန်းကတော့ ဒီတိုင်း CD ထည့်ပြီးသွင်းလိုက်တာပဲ..
ကျွန်တော်က Ubuntu သုံးတာပါ...
ကျွန်တော်က ဖိုင်ရှယ်ရားရင်းလုပ်ရင်း XAMPP ကိုသုံးပြီး လိုကယ်ဆိုဒ်တို့ chat room တို့ပါ လုပ်ချင်တာပါ။ အဓိကကတော့ file sharing လုပ်ချင်လို့ပါ။ စက်အလုံး 50/100 လောက်က လိုချင်တာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ဆော့၀ဲလ်တွေကို တစ်ပြိုင်တည်း ယူလို့ရအောင် လုပ်ချင်တာပါ။ ၀င်းဒိုးဆာဗာနဲ့ လင်းနစ်ဆာဗာ ဘယ်ဟာက အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ရင် သင့်တော်မလဲ။ ကျွန်တော် အခုထိ သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ချက် မချရသေးလို့ပါ။ ဆာဗာ OS ကိုလည်း တစ်ခါမှ မသုံးဖူးသေးဘူး။ အခုမှ စမ်းရင်းနဲ့ စလုပ်ရမှာပါ။
ဟက်၀ဲလ်ပိုင်း ဆာဗာထိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာကိုတော့ ကောင်းကောင်း ဆင်ထားမှာပါ။
ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲ။ အချိန်ရမယ်ဆိုရင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ရှင်းပြပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ...
P4 2.4, Memory 512, HD 80 (40စီpartationခွဲထား), AGP 32 Onboard, XP SP3 ရှိတဲ့စက်ပေါ်
တင်တုန်းကအတွေ့အကြုံလေး ပြောမလို့ခင်ဗျ။ Windows ထဲကတင်တာပါ။
Windows တက်ပြီးတဲ့အချိန် CD ထည့်ရင် အောက်ကပုံပေါ်လာမှာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ Windows ထဲမှာတင်မှာဆိုတော့ Install inside Windows ကို ရွေးပါတယ်။
Username ပေး၊ Password ပေး၊ သေချာမှတ်ထား။
ကျန်တာကို ကျွန်တော် Default ပဲထားပါတယ်။
အောက်ကပုံပေါ်လာပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
CD ထုတ်ထားဖို့ CD Tray လည်းပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ Reboot now ရွေးပြီး Finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။
Reboot လုပ်ပြီး Dual Boot နဲ့တက်လာမှာပါ။ Ubuntu ကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Slide Bar နဲ့ Ubuntu တက်လာပြီး Checking the Installation ဆိုတဲ့ Window တက်လာပါတယ်။
ပြီးရင် auto reboot လုပ်ပြီး ခုနကအတိုင်း dual boot နဲ့တက်လာမှာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့
user name, password တောင်းပါပြီ။ user name, password ထည့်ပေးပြီးရင်တော့ Ubuntu
တက်လာပါပြီခင်ဗျား။ ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ Ubuntu က Ubuntu 8.10 Desktop Version ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအထိတော့ပြီးပါပြီ။ နောက်ပိုင်းကိစ္စကတော့ ကိုစေတန်ကြီး ပို့ချမယ့်သင်တန်းလိုက်တက်ပြီးမှ
အဆင်ပြေရင်server version command များလို့ချင်လို့ပါခင်ညာ:)
Please go to that site
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ လျှာရှည်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ MZ မှာ mm လိုlinux command တင်ထားတာတွေ့လို့ zshare ကဆွဲကြည့်တာမရလို့
ဘဝတူတွေ တွေ့ကြပြီပို့။ ကျနော်နဲ့ အဲဒီလိပ်ဖိုးဖိုး Zshare က ရည်းစားလုဖက်လေ။ သူက အပေးပဲလက်ခံတာ။ ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ရိုးရာမပျက် looping ပတ်နေလေရဲ့။ လင့် တချက်လောက် ပေးကြည့်လေ ရရင်တော့ try ပေးမယ်
ဟုတ်ကို istein ေ၇ မိုးလင်းထဲက ကျနော်ချာလည်ရိုက်နေတာဒီ link ပါခင်ညာ
ကျနော်ချာလည်ရိုက်နေတာဒီ link ပါခင်ညာ
အကိုတို ့အမတို ့ရေ... ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဒါလေးကူညီပါအုန်းနော်... ကျွန်တော်က Linux Server ထိုင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်က IP Address (Net) မတူတဲ ့Client နှစ်လုံးကို linux server ကိုကြားခံနယ်ထားပြီး network မိအောင်ချိတ်ချင်ပါတယ်။ File, Data Sharing လုပ်ချင်ပါတယ်။ သင်ပေးကြပါအုန်းနော်...:77::77::77:
GW - 192.168.202.254
DNS - 203.81.71.146
Windows တုန်းကတော့ Bridge Network နဲ ့တော့လုပ်ဖူးတယ်.... အခုဟာက ကြားခံနယ် Linux ဖြစ်နေတော့ မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။။ ကျွန်တော်အခု linux server ကို Internet ချိတ်ပြီးသုံးနေတယ်။ :77::77::77:
It's funny!!! :112:
You have to use iptable firewall rules to route traffic from one network to another.Pls Check Iptable how to in google.
Another one is to enable packet forwarding in kernel
Normally you will need samba user account pls see...
or edit your self the config file under /etc/samba/
The configuration settings are very intutive. :-)
အခုဖော်ပြထားတဲ့ Delay Pool Coding လေးကို အကိုအစင်ပြေသလိုရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်နားမလည်လို ့ပါ။ လေးစားစွာဖြင့်:77::77::77:
Squid မှာ Delay pool ကို အချိန်ရယ် MAC ရယ် File type ရယ် သုံးမျိုး‌ပေါင်းပြီး Configure လုပ်ပုံ‌လေး မြန်မာလို ဘယ်သူရှင်းပြ‌ပေးမလဲ...?
တစ္ခုခ်င္းဆီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တင္ေပးလိုက္တယ္ ။
အေထာက္အကူၿဖစ္မယ္လို ့ထင္လို ့ပါ ။
1.	Websites block
acl LAN src 192.168.1.1/24
http_access deny badsite LAN
acl badsite dstdomain “/etc/squid/badsite.squid”
http_access deny LAN badsite
2 . Web access by IP address
Acl home src 192.168.1.10
http_access deny home
3 . Web access by time
Acl offic_hour time M T W H F 9:00-17:00
http_access allow LAN office_hour
acl morning time 9:00-10:00
http_access allow LAN morning
4 . Restricting download File Type
Acl file_mp3 urlpath_regex –i \_.mp3$
http_access deny LAN file_mp3
Acl download_limit urlpath_regex “/etc/squid/filetype.squid”
http_access deny LAN download_limit
5 . Restricting download file size limit
Acl Group2 porxy_auth user3 user4
6 . Restricting upload file size limit
7 . Restricting web access MAC
Acl mac1 arp 00:11:22:33:44:55
http_access deny mac1
8 . port blocking
Acl bad_ports port 443
http_access deny bad_ports
Hi bros. I bring one problem. I haveaCent OS 5.0 installed inaVirtual box, with host only network adapter. The ip of that os is 192.168.1.1 and the ip of the network card from host os is 192.168.1.2. The problem is that I can ping from host OS(windows 7) to Cent OS(in VBox) But i can't ping from Cent OS to windows 7. Any Ideas?
@darkness0zack .....Please let me know one thing..Do you want to ping from CentOS server (virtual) to Window OS physical network card IP or virtual network card IP. Normally Window also have one virtual network card when you installed the Oracle Virtual Box. You using Host Only Adapter surely you can ping CentOS to Window Virtual Network Card IP. Sorry for my English and I also the beginner